Maxamuud C/llaahi Siraaji oo ku guuleystay doorashada kursi kamid ah kuraasta ka bannanaan Golaha Shacabka – Walaal24 Newss
Maxamuud C/llaahi Siraaji oo ku guuleystay doorashada kursi kamid ah kuraasta ka bannanaan Golaha Shacabka
Doorashada kursi kamid ah Golaha Shacabka Jamhuuriyadda Soomaaliya oo maanta ka dhacday magaalaad Kismaayo ee xarunta KMG ah ee Jubbaland ayaa waxaa ku guuleystay Maxamuud C/llaahi Siraaji oo la dhashey Ex. Wasiir Cabaas Siraaji.
Waxaa uu heley Maxamuud C/llahi Sheekh Siraaji codad gaaraya 50-cod, taasi oo fursad u siisay in uu ku guuleysto buuxinta kursigasi ka bannaanaa Golaha SHacabka.
Waxaa kursigaasi kula tartantay Gabar lagu magacaabo Fardowso Xuseen Maxamed oo aan helin wax cod ah,iyadoo mid kamid ah codadkii la dhiibtay uu halaabay, Fardowso Xuseen Maxamed ayaa sheegtay in ay aqbashay qaabka ay u dhacday doorashadaasi, islamarkaana soo dhoweeysay.
Dhanka kale Guddiga madax banaan ee doorashooyinka Qaranka ayaa sheegay in doorashada ay u dhacday qaab cadaalad ah,islamarkaan uu kamid ahaa 4 kuraas oo ka bannaaneyd Golaha Shacabka oo mid kamid ah Jowhar dhowaan lagu doortay,halka 2 kalena Muqdisho iyo Galmudug lagu qaban doono.
Ra’iisul-wasaaraha Itoobiya oo is casilay kadib dibad baxyo xoog badan ka socda Dalka Itoobiya
Dowladda Itoobiya ayaa heshiis nabadeed la saxiixatay jabhadda hubeysan ee OLF
Guddoomiyaha Golaha Shacabka oo kulan la qaatay Guddiga Difaaca Golaha Shacabka